Tuesday August 04, 2020 - 14:43:44 in Wararka by
Wazaarada gaashaandhiga Mareykanka ayaa bishii July ee sanadkii 2019ka Stephen Townsend u magacowday taliyaha ciidamada Mareykanka ee Africa ee marka magacooda lasoo gaabiyo loo yaqaano AFRICOM, isagoo badalay Generaalkii ka horeeyey ee la oran jiray
Stephen Townsend iyo Xasan Cali Kheyre
Warbaahinada caalamka oo warbixino kala duwan ka qoray magacaabista Townsend ayaa diiradda saarayey khibrada ciidan ee Generalka cusub iyo taariikhda military ee uu leeyahay iyo goobihii uu kasoo dagaalamay, iyadoo dhanka kale uu aad u koobnaa falanqeynta iyo diraaseynta shakhsiyada hogaamiyahan iyo halka uu asal ahaan kasoo jeedo.
Stephen Townsend waa Generalka 61 sano jir ah oo ku dhashay magaallo lagu magacaaboScheinfeld oo ku taalla galbeedka dalka Jarmalka. Sida uu sheegayo wargeyska Washington Post waxaa iska dhalay nin Afghani ah iyo haweeney Jarmal ah oo iska zineystay kuwaas oo dhiganayey Jamaacad ku taalla dalka Jarmalka.
Maadama ardayga Afghani ah iyo haweeneyda Jarmalka ah ay ahaayeen kuwo ku jira daraasadooda waxbarasho oo aan isku filneyn, waxaa la sheegay in isagoo 11 maalmood dhalan ku wareejiyeen askari American ah iyo xaaskiisa oo ka shaqeynayey dalka Jarmalka, kuwaas oo Stephen Townsend kusoo barbaariyey xeryaha ciidan ee Mareykanku ku lahaa dalka Jarmalka.
Markii uu Afghansitan U Safray
Wargeyska Washington Post ayaa sheegaya inaanu markii horeba dood ka taagneyn wacalnimada Generaalkan balse loo maleyn jiray inay iska dhaleen Talyaani iyo Jarmalka, kadibna lagu soo wareerjiyey qoyska Americanka ah ee daganaa wadanka Jarmalka. wuxuu tibaaxay in goordambe la ogaaday inuu ahaa mid ay iska dhaleen arday Afghani ah oo cilmiga caafimaadka ka baranayey Jaamacad ku taalla Jarmalka iyo haweeney kasoo jeeda dalka Jarmalka oo iyadana cilmiga aartistenimada ka baraneysay Jamaacada.
Stephen townsend qudhiisa dib ayuu ka odaay inuu yahay ilmo zino oo ay iska dhaleen Afghani iyo Jarmalad sida uu sheegayo Washington Post. "ma aanan ogeyn inuu Aabahey kasoo jeedo Afghanistan ilaa aan ka soo gaaro 31 sano, waxaan aaminsanaa inuu Aabahey kasoo jeedo Talyaaniga, laakiin goordambe ayaan ogaaday in aanan Talyaani ahayn” ayuu yiri.
Wargeyska Washington Post wuxuu sheegayaa inuu Generalkan dhowrjeer isku dayey inuu booqdo halkaas oo uu raadsado ehelka Afghaniga ah ee uu ka dhashay Aabihiis balse uma aysan suuragalin. Wixii la joogaba sanadkii 2001-kii, ayuu Stephen Townsend kamid ah ciidamadii Mareykanka ee duullaanka ku qaaday Afghanistan, kolkaas oo ahayd markii ugu horeysay ee cagta dhigay dhulka uu isir ahaan kasoo jeeday.
"Tan iyo markii aan ogaaday inaan ahay Afghani, waan jeclaa inaan booqdo Afghanistan balse ma aanan fileyn inaan booqan doono inagoo garwaaxsan qorigeyga” ayuu yiri xilli uu ku sugnaa Teendho ciidan oo ku taalla Afghanistan.
Aabihiis oo markii dambe noqday dhaqtar ayaa goorhore geeriyooday, balse waxaa la sheegay inuu helay qaar kamid ah ehelka Aabihiis oo usoo qaxay Jarmalka iyo Mareykanka intii uu socday duullaankii Ruushka ee Afghanistan 1980s. Markii ugu dambeysay ee uu la kulmay wax kamid ah ehelka Afghaniga ee Aabihiis waxay ahayd sanadkii 1996-kii, xilligaas oo uu gobolka Virgina kula kulmay nin uu sheegay inuu ahaa adeerkiis oo lagu magacaabo Naasir Shanzaab sida uu tilmaamayo wargeyska.
Sooyaalka Gaboodfal ee Sarkaalkan
Stephen Townsend oo hadda ah taliyaha ciidamada Mareykanka ee Africa, mas'uulna ka ah gumaadka ba’an ee lagu hayo dadka Soomaaliyeed ayaa ah Ablaawe kusoo barbaaray teendhooyinka ciidamada Mareykanka, islamarkaana cimrigiisa oo idil kusoo qaatay arimaha dagaalka, wuxuuna caan ku ahaa dhiigyacabnimada, naxariis darada iyo gumaadka dadka aan barimageydada ah, si gaar ah Muslimiinta.
Wuxuu kasoo qeyb qaatay duullaanadii Mareykanka ee Afghanistan iyo Ciraaq. wuxuu ku lug lahaa xasuuqyadii Shahikot iyo Bacquuba, isagoo sidoo kalena kamid ahaa Generaaladii hogaaminayey duullaankii ballaarnaa ee 2014kii Mareykanku ku qaaday Shaam iyo Ciraaq ee lagu xasuuqay shacabka Muslimiinta ee labada dal.
Hogaamiyahan 61 sano jir ah ayaa hal sano kadib noqon doono General howlgab ah oo ka tagi doono shaqada ciidamada Mareykanka marka uu gaaro 62 sano isagoo la tagi doonaa kiisas dambiyo iyo jaraa’im ah oo uu ka galay Muslimiinta.
Hoggaanka Musharixiinta oo qaadacay guddiga doorashada lana casilo taliyaha Nabad sugidda.
Ciidamada Itoobiya oo lawareegay gacan ku haynta magaalooyin katirsan gobolka Tigray.